ညီနေမင်း: camtasia 6
အရှင်ဘုရားသုံးနေတာက version 5.0.1 ပါဘုရား . အခု တပည့်တော် version6ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဘုရား အဆင်ပြေပါမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်ဘုရား .. အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ link က Download လုပ်ပါဘုရား . ၃ နေရာကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘုရား
ကျွန်တော် တစ်ခု ကြိုပြီးပြောပါရစေ . ကျွန်တော့်ကို မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းများရှိရင် naymin123@gmail.com ကိုပဲ ပို့ပေးဖို့ပြောချင်တာပါ . တစ်ချို့မသိသူများက konyinaymin@gmail.com ကို ပို့ပို့နေလို့ မေးတဲ့မေးခွန်းများကို ပြန်မဖြေပေးနိုင်တာကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ . ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့မေးလ်ကို မသုံးတော့ပါဘူး . တစ်ခါတစ်လေမှ ဖွင့်ကြည့်တာပါ .
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊
Posted by ညီနေမင်း at 12:06 AM